Siyaabaha kale ee wax loo bixiyo - Cuntooyinka Taayirrada
Waxaa jira dhowr qaab oo aad ku bixin karto si aad u taageerto deriskaaga u baahan. Waan ku qanacsanahay taageeradaada Cuntooyinka Lugaha Lugta, si kasta oo aad u doorato inaad u sameyso
Marti galiso uruurinta lacag uruurinta
Platforms sida Facebook ayaa kuu fududaynaya inaad lacag u ururiso magaca ururada aad jeceshahay sida Cunnooyinka Wheels. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku martigeliso lacag-ururinta Cunnooyinka Wheels ee Facebook-ga, halkan guji si aad u bilowdo.
Ka Qaybgal Dhacdo
Bal eeg annaga dhacdooyinka bogga fursadaha aad uga mid noqon karto saaxiibbadaada Cunnooyinka Dukaan-doonka ah magac ujeedo weyn.
Ma doonaysaa in shirkaddu ay kafaalo qaado dhacdo taageerta Cunnooyinka Shaagagga? Kala hadal kooxdayada fursadaha kafaalaqaadka adigoo iimayl u diraya agaasimaha horumarinta iyo isgaarsiinta, Jeni Gregory.
Ku tabaruc boosto ama taleefan
Haddii aad ku qanacsan tahay inaad ku tabarucdo boostada ama telefoonka, halkan guji si aad u hesho tilmaamaha ku saabsan sida loo sameeyo.
Hadiyadaha goobta shaqada ku habboon
Goobo badan oo shaqo waxay taageeraan sadaqadda sadaqadda ee shaqaalahooda iyagoo siiya hadiyado u dhigma. Baro inbadan hadiyadaha iswaafajinta goobta shaqada.
Cunnooyinka Taageerada ee Wheels leh Amazon Smile
Iibsashadaada laga sameeyay Amazon waxay taageeri kartaa Cunnooyinka Wheels! Si fudud u gal qosol.amazon.com oo ku dhaji tabta taageerta bidix ee kore ee shaashaddaada Metro Meals on Wheels Collaborative, Inc.